Maxaa ka jira inuu is-casilay taliyaha booliska Soomaaliya? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa ka jira inuu is-casilay taliyaha booliska Soomaaliya?
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa beenisay warar lagu faafiyey baraha bulshada, oo sheegayay inuu xilka iska casilay Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar.
Wararkaas ayaa saacidihii tegay aad looga hadal hayey baraha bulshada, hase yeeshee Afhayeenka Wasaaradda Warfaafinta Ismaaciil Mukhtaar Cumar Orange oo war qoraal soo saaray ayaa ku tilmaamay kuwa aan waxba ka jirin.
Hoos ka akhriso qoraalka afhayeenka